डलरको भाउ १ सय २२ रुपैयाँ माथि - Rajmarga
डलरको भाउ १ सय २२ रुपैयाँ माथि
काठमाडौं । अमेरिकी डलरको मूल्य एक दिनमा करिब २ रुपैयाँले बढेको छ । मंगलबार एक डरको खरिद दर १ सय २२ रुपैयाँ ३४ पैसा पुगेको छ । सोमबार एक अमेरिकी डलर खरिद गर्न १ सय २० रुपैयाँ ६० पैसा खर्चिनु पर्ने थियो ।
Previous post: मुख्यमन्त्री तथा पूर्व चौकिदार त्रिलोचन जीको नेत्र किन बन्द ?
Next post: कोरोनाबारे १२ वर्ष अघि गरेको भविष्यवाणी कसरी मिल्यो ?
असारमा ९६ अर्ब राजश्व सङ्कलन